Soosaarka Warshadaha Shiinaha Warshad iyo Warshad | Jiashun
Xargaha dunta iyo weft-ka ayaa is barbar socda oo loo qaabeeyey qaab fidsan, oo leh xiisad isku mid ah, cufnaanta sare ee habaynta fiber, ma fududa in la rogrogo, fududahay in la shaqeeyo, filim wanaagsan oo ku dheggan hanti iyo xoog farsamo sare
Kuleylka kuleylka, ka hortagga dabka, dib u dhaca ololka. Marka maaddada uu ololku gubo, waxay qaadi kartaa kuleyl badan, waxay ka horjoogsan kartaa ololka inuu dhex maro oo uu go'doomiyo hawada. Habka jiifka gacanta waxaa badanaa loo isticmaalaa qolka markabka, taangiga keydinta, munaaradda qaboojinta, markabka, gaariga, taangiga iyo wixii la mid ah: 7518 3732 3784 3786 3788 666 255
Q1: Ma waxaad tahay warshad? Halkee ku taal
A: waxaan nahay soo saare. oo ku yaal Jiangsu, oo u dhow dekedda shanghai.
Q2: Waa maxay MOQ?
J: Badanaa 1 Ton, laakiin amar yar ayaa sidoo kale la aqbali karaa.
Q3: Xidhmada & Raridka.
J: Xirmada caadiga ah: kartoonka (Waxaa lagu soo daray qiimaha midowga)
Xirmo Gaarka ah: waxay u baahan tahay in lagu dalaco hadba xaaladda dhabta ah.
Maraakiibta caadiga ah: gudbintaada Xamuulka ee aad magacawday.
Q4: Goorma ayaan bixin karaa?
J: Badanaa waxaan soo xiganaa 24 saac gudahood kadib marka aan helno baaritaankaaga. Haddii aad aad u deg deg tahay si aad u hesho qiimaha pls na soo wac ama noo sheeg emaylkaaga, si aan kaaga soo jawaabno mudnaanta.
S5: Sideed ku soo dalacdaa khidmadaha muunadda?
J: Haddii aad u baahan tahay shaybaar ka mid ah keydkeena, waxaan ku siin karnaa si bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso khidmadda xamuulka.Haddii aad u baahato cabir gaar ah, Waxaan kaa qaadi doonnaa khidmadda samballada oo la soo celin doono markii aad dalbaneyso .
Q6: Waa maxay waqtigaaga dhalmada ee wax soo saarka?
J: Haddii aan leenahay keyd, 7 maalmood gudahood ayaan ku bixin karnaa; haddii kaydka la'aan, u baahan tahay 7 ~ 15 maalmood!
Hore: Dhar elektaroonig ah
Xiga: Dharka Dahaarka ee PU